Iindaba -I-Coronavirus eNtsha eguqulwe eSpain ukunqanda ukuphindaphinda kwembali. I-Bhritane, i-France, i-Itali ne-Jamani zavula uMgaqo-nkqubo weBlockade kwakhona
I-Coronavirus entsha iguqukile eSpain ukunqanda ukuphindaphinda kwembali. I-Bhritane, i-France, i-Itali ne-Jamani zavula uMgaqo-nkqubo weBlockade kwakhona
I-coronavirus entsha iguquka eSpain
Ngexesha leHalloween, ngokwe-TIMES, i-Bhritane izakuvota ePalamente kwiveki ezayo. Ngenxa yokuqhambuka kwalo bhubhani, i-Bhritane izakukhetha ukungena kuthintelo lukazwelonke kwakhona ngaphambi kweshedyuli, ekulindeleke ukuba ihlale kude kube sekuqaleni kukaDisemba. Eli iya kuba lelinye ilizwe elibalulekileyo lasentshona emva kokuvalwa ngokulandelelana kweJamani, iFrance ne-Itali. Esona sizathu sokukhathazeka kwamazwe aseYurophu kukuba i-46% yamatyala amatsha aqinisekisiweyo emhlabeni avela eYurophu kwiveki ephelileyo, kwaye isithathu sokufa sivela eYurophu. Ngokwengxelo yesayensi, uninzi lwamatyala amatsha e-coronavirus eYurophu avela kwi-coronavirus eguqulweyo. Le ntsholongwane isenokunyuka ngokuthe ngqo eSpain, ekwayenye yezizathu ezibalulekileyo zokuba kutheni i-coronavirus entsha kunzima ukuyilawula eYurophu kwaye inezinga eliphezulu lokusweleka kwabantu!
Ukoyika imbali iyaziphinda
Ubhubhane wesithsaba omtsha ukhumbuza abantu abaninzi ngoqhambuko lomkhuhlane waseSpain kwimbali yoluntu yanamhlanje. Ngelo xesha, umkhuhlane waseSpain wavela kwiifama zaseMelika. Njengoko i-United States yathumela amajoni eYurophu ukuba aye kuthatha inxaxheba kwiMfazwe yeHlabathi yokuQala, yazisa intsholongwane yomkhuhlane waseSpain nayo. Ukufika kwethu eYurophu, amazwe athatha inxaxheba kwiMfazwe yeHlabathi yokuQala, njenge-Bhritane, i-France ne-Jamani, asebenzise indlela yokuzifihla ukuthintela umkhuhlane ekutshabalaliseni umoya wangaphambili. Nangona kunjalo, iSpain, ilizwe elingathathi hlangothi kwiMfazwe yeHlabathi yokuQala, laqhubeka nokusasaza inani labantu ababhubha ngenxa yomkhuhlane. Izigidi ezisibhozo zabantu bosulelwe ngumkhuhlane, ngoko ke ekugqibeleni wachazwa njengomkhuhlane waseSpain. Olona phawu lukhulu kumkhuhlane waseSpain kukuba emva kwethambo lesibini lokutshintsha, umkhuhlane waseSpain uyingozi ngakumbi. Inani labantu abancinci nabakwiminyaka ephakathi abaswelekileyo lelona lininzi. Xa kuthelekiswa nokusweleka kwabantu abazizigidi ezili-10 kwiMfazwe Yehlabathi I, inani labantu abaswelekileyo ngenxa yomkhuhlane waseSpain lalingama-50 ezigidi. ~ 100 yezigidi zabantu. Intsholongwane entsha yesithsaba iyahlasela e-Europe ngeli xesha, iSpain ikwayindawo ehlaselwe kakhulu, kwaye intsholongwane eguqulweyo nayo iqinisekisiwe eSpain, ngezifundo zembali, ke amazwe ase-Yuropu ayayoyika imbali iphinda-phinda, ngenxa yoko babonakala belumke ngakumbi xa Ukujongana nomtshangatshangiso wesibini wobhubhane wesithsaba esitsha, Akukho lizwe kunye nabaphandi benzululwazi abancomela ukusetyenziswa kwemihlambi ekhuselayo ukulwa ne-coronavirus entsha.
Ukuthelekiswa kwedatha kwamaza amathathu omkhuhlane waseSpain
Emva kokubona ulwazi lomntu nge-coronavirus entsha, nangona itekhnoloji ye-biomedical yomntu yangoku yomelele kakhulu kunaleyo yomkhuhlane waseSpain owawudumile kwiminyaka elikhulu eyadlulayo, phantse unyaka wokuqonda i-coronavirus entsha, ilele phakathi kwezinto ezifihliweyo nezingabonakaliyo. Ubume be-coronavirus entsha Ngokomyinge, ukusasazeka kwe-coronavirus entsha kunamandla, kwaye nomphandi wase-Russia uzosulele ngokuthe ngqo nge-coronavirus entsha, eqinisekisa ukuba i-coronavirus entsha inokosulelwa kabini okanye kathathu, ekwabonisa ukuba isitofu sokugonya sisebenza kakhulu, kwaye umkhuhlane waseSpain ngowokuqala. Inqanaba lenzeka ngentwasahlobo ka-1918, kwaye yayingumkhuhlane oqhelekileyo onefuthe elincinci, emva koko wanyamalala ngokufutshane. Eyona nto inempembelelo kumaza wesibini womkhuhlane waseSpain owenzeka ekwindla lowe-1918. Yayililiza elinelona zinga liphezulu lokusweleka kwabantu. Ngelo xesha, intsholongwane yomkhuhlane yahlasela inkqubo yomzimba yokuzikhusela yaza yabangela ukuba umkhuhlane waseSpain uphinde uhlasele. Ukugqitywa kokuqhambuka kuya kukhokelela ekuveleni kwentsholongwane eyingozi ngakumbi. Njengokuba amajoni omzimba womntu esiya kumtshangatshangiso wesibini womkhuhlane waseSpain, emva konyaka, umkhuhlane wesithathu wabakho ebusika bowe-1919, kwaye umjelo wesithathu womkhuhlane waseSpain unezinga lokusweleka phakathi kwe-Wave enye kunye ne-wave ezimbini!
Ke ngoko, nangona ubhubhane wesithsaba omtsha ucinezelwe ngokufanelekileyo e-China, akufuneki uthathwe kancinci. Emva kwayo yonke loo nto, ngembali njengesipili, umkhuhlane waseSpain yeyona ncwadi ibalaseleyo kwimbali yobhubhane!
I-SHENZHEN EISEN INDUSTRY LIMITED IKUANGYE DONGGUAN TECHNOLOGY CO., LTD